एडम स्यान्डलरसँग एक फिल्म? सूची: एडम स्यान्डलर संग फिलिमहरु
एक अमेरिकन अभिनेता र निर्माता आदम स्यान्डलर, ब्रसेलिन को न्यूयर्क क्षेत्रमा9सेप्टेम्बर, 1966 को जन्म भएको थियो। आदमको बुबा स्टेनली स्यान्डलर हो, आमा जेमी स्यान्डलर हुन्। 1971 मा, परिवारले मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर शहरमा सारियो। आदमले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा मन्चेस्टरका एक स्कूलमा प्राप्त गरे, र त्यसपछि न्यूयर्क गए र विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्यो, जुन 1 99 1 मा स्नातक डिग्री संग सम्मान गरे। कलेजको अवधिमा आदम स्यान्डलरले हास्य कलाकारको क्षमता खोजे। उनले हरेक सम्भावनामा आफ्नो प्रतिभा विकास गर्न थाले, क्लब र क्याम्पसमा स्किट्स खेल्थे, जबकि उत्तीर्णमा स्टाइल अपको शैलीमा स्क्रिप्टको साथ आयो। यो विशेषता हो कि भविष्य हास्य अभिनेता, हलिवुड स्टार, विश्वविद्यालय को अन्य शौकिया अभिनेता संग एकजुट गर्न को लागी नहीं था, उनले व्यक्तिगत रूप देखि कार्य गर्ने प्रयास गरे। तथापि, यो स्वार्थीताको अभिव्यक्तिलाई मान्न सकिदैन, आदमले मित्रवत र खुला व्यक्तिको रूपमा लिएका थिए। तर उनले आफ्नो अनूठे छवि सिर्जना गर्न चाहन्थे।
1 99 8 मा एक विद्यार्थीको रूपमा आदम स्यान्डलरले सिनेमामा आफ्नो पहिलो पटक तुरुन्तै चलचित्र "अउ ओवरबोर्ड" मा अभिनेता वालेर ब्रेमेन द्वारा निर्देशित गरे। आदम स्यान्डलरसँग पहिलो फिल्म अनुकूल समीक्षा प्राप्त भयो। उनको चरित्र महत्वाकांक्षी अभिनेता हास्य हो। शेकिकी Moskovitz, जसका रोमांचहरु को बारे मा फिलिम बतािन्छ। यो मिस मिस ब्रान्ड प्रतियोगिताको लागि बनाईएको महासागर क्रूज लाइनरमा कार्य गर्दछ। स्यान्डलरको भ्रामक हास्यबाट प्रभावित अमेरिकी हास्य अभिनेत्री डेनिस मिलरले बताए कि उनी लस एन्जलसमा जान्छन् र धेरै हलिवुड परियोजनाहरूमा भाग लिन्छन्। आदम स्यान्डलरको कलात्मक क्यारियरको गति बढ्न थाल्यो।
1 99 1 को साल जब आदम स्यान्डलर फिलिमहरु - कमेडी उनको सबै भागीदारी मा उपस्थित थिए। यो थियो, त्यसो गर्न, आफ्नो व्यक्तिगत रचनात्मकता को चोटी। उनले माइकल लेहमन "द पस्टुल्सहेड" द्वारा निर्देशित संगीत कमेडी को फिलिम मा भाग लिया, जसमा उनले पिप खेलाए, एक रॉक संगीतकार, एक चट्टान र रोल कलाकार को क्षेत्र मा अगाडी बढन को लागि सपना देख्यो। दुई अन्य वर्णहरू, चेज र रेक्स, अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर र स्टीव Buscemi द्वारा खेलेका थिए । अर्को चलचित्रमा, एक शानदार कमेडी शीर्षक "एगहेड्स," स्यान्डलरले क्यारिनिन क्यारेक्टर खेल्नुभयो। यो एक माध्यमिक भूमिका थियो, तर अभिनेताले सबै परियोजनाहरूमा भाग लिने प्रयास गरे जुन कसैले आफ्नो प्रगतिमा योगदान दिए। आदमले 1 995मा फिलिम "बिली मैडिसन" मा मुख्य भूमिका निभाए, टिम हरलिहाको परिदृश्य अन्तर्गत ताम्रा डेविस द्वारा निर्देशित। अभिनेता संग फिलिमहरु (उस समय एडम स्यान्डलर पहिले देखि नै धेरै प्रसिद्ध थियो) बढती लोकप्रियता हासिल गर्न को लागी।
त्यसपछि आदमको फिल्मोग्राफी तीन थप फोटोहरूसँग पुनःस्थापित गरियो:
हास्य "लकी गिलोमोर", जो डेनिस डुगान द्वारा निर्देशित गरिएको थियो, जसमा खेलाडीले मुख्य भूमिका खेलेको;
हास्य थ्रिलरले "बुलेटरोक" नामक अर्नेस्ट डिकर्ससन (आर्ची मूसाको भूमिका) द्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो;
एडम स्यान्डलरसँग "फिलिममा गायक" संग फिल्म फ्रैंक कोरुची (मुख्य भूमिका, रोबी हार्ट) द्वारा निर्देशित।
अन्तिम तस्विरले सबैभन्दा धेरै चाप्याउने समीक्षाहरू एकत्रित गर्यो। पहिलो दुई चलचित्रहरू विश्वकप चित्रकारमा गोली मारिएका थिए, र तेस्रो लाइन चलचित्र चलचित्रहरूमा तेस्रो।
आदम स्यान्डलर संग शुरुआती फिलिमहरु, जसको सूची केवल छ6शीर्षकहरु हो, सनसनीखेज थिएनन्, को रूप मा हास्य अमेरिकन दर्शकहरु लाई शान्त तरिका देखि बुझिन्छ, तर आलोचकहरु को रूप मा एक संवेदना को रूप मा जीवन शैली को कला को रूप मा सैंडलर को खेल को रूप मा ध्यान दिए। अभिनेताको काममा एक विशेष स्थान ले फिल्म थरथरम "प्रेम दंग डाउन" द्वारा लिइएको थियो जुन पाम थॉमस एन्डरसन द्वारा निर्देशित 2002 मा फिलिम भयो। आदमले बैरी एगानलाई खेलाडी, यौन सम्बन्ध सहित गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको सामना गर्दछन्। बैरीको बचपन आफ्नो सात बहिनीहरूको कम्पनीमा पारित भयो, निरन्तर महिला वातावरणले जवान इगान असुरक्षित बनायो, विभिन्न परिसरहरूको अधीनमा। सौभाग्य देखि, उनले अन्ततः आफ्नो प्रेम पूरा गर्न सके। फिल्मले "बेस्ट कमेड" को लागि "बेस्ट कमेडी अभिनेता" र एमटीवी चलचित्र अवार्डमा "गोल्डेन ग्लोब" लाई आदम स्यान्डलर ल्याएको थियो। आदम स्यान्डलर, जसको सबैभन्दा राम्रो चलचित्रहरू आगामी अवधिमा फिलिम गरिएको थियो, न केवल हास्य अभिनेता खेल्न खोजे।
उही 2002 मा आदम स्यान्डलर संग दुई र अधिक फिलिमहरू थिए: "मिलियनपति अनैतिक" निर्देशित स्टीफन ब्रिल द्वारा, जसमा स्यान्डलरले मुख्य भूमिका खेले। उनको चरित्र पिज़्ज़ेरियामा लुगाफ्लोडिज डिज्ज भन्ने एक कुक हो, जसले आफ्नो अनुहारको बहुसंख्यक भाग पार्यो। र "आठ पागल नाइट्स" - एडम स्यान्डलर संग एनिमेटेड फिल्म, जसमा नायक एक अभिनेता को आवाज मा कार्य गर्दछ र उनको आवाज मा बोल्छ। आवाज अभिनय पनि मा आदम, जैकी स्यान्डलर को पत्नी को भाग लिया।
सम्पूर्ण 2009एलाम स्यान्डलरका लागि ट्र्यागिकमेडी "प्रकोष्ठी" को हस्ताक्षर जड अपोटो द्वारा निर्देशित गरिएको छ। कामलाई नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ, र अभिनेताले कामको सामना गर्न सकेन। यस तस्वीरको लागि, स्यान्डलरले किशोर च्वाइस अवार्डको लागि डबल नामांकन प्राप्त गर्यो। र एडम स्यान्डलर संग अर्को चलचित्र, जो अर्को वर्ष जारी गरिएको थियो, अभिनेता को उनको लामो समय साथी र शूटिंग साझेदार, केविन जेम्स, रोब स्किइडर, डेभीड स्पैड र अन्य संग मिलन को अनुमति दी। यो चलचित्र "ओडेनोकोस्लाभिनिकी" भनिन्छ र स्नातकोत्तर पछि साथी साथीहरु को बैठक को बारे मा भन्यो।
2011 मा, स्यान्डलरले डेनिस डुगानले हास्य चलचित्र "प्रेटेंन्ड मेरी पत्नी" मा अभिनय गरे। आदमले यस चालाक डैनी मेकबोलाई खेलेका थिए, जसले चिसोलाई आफ्नो परिचित केटीमा घुमाई, आफ्नो स्थान हासिल गर्न। सेटमा स्यान्डलरको साथी प्रसिद्ध फिल्म स्टार जेनिफर एनिस्टन थियो। एडम स्यान्डलरसँग चलचित्रहरू जसको सूची पर्याप्त लामो छ, प्रायः हल्का हास्य हुन्, तर कहिलेकाहीं स्क्रिनमा के हुन्छ भने तपाईले सोच्नुहुन्छ।
आदम स्यान्डलरको व्यक्तिगत जीवन सर्वोत्तम विक्रेताको लागि एक कहानी हुन सक्छ "पारिवारिक खुशी कसरी तपाईंको प्रिय पत्नी संग खोज्न।" अभिनेता 2003 मा विवाहित जोडी जैकी टाइटाउन, धेरै फिलिम परियोजनाहरु मा उनको लामो साथी। नवविवाहहरू समुद्र तटमा विवाहित थिए, दाहिने आकाशको मुनि। आमन्त्रित अतिथिहरू बीचमा धेरै हलिवुड स्टारहरू, आदम र जैकीका साथीहरू थिए। मई 2006 मा, Sandler परिवार एक छोरी, साडी मैडिसन, र दुई वर्ष पछि एक दोस्रो छोरी, सनी मेडिलेन, जन्म भएको थियो।
लिङ्ग साजिश - के यो हो?
मैक्सिम Matveyev: Musketeer को दावी को फिल्मोग्राफी
होटल विवरण रूस मा "Listrigon"। होटल Balaklava मा "Listrigon" सुसज्जित, सुविधा र समीक्षा
कोरियाली "misha" कस्मेटिक्स (Missha): वर्णन, सुविधा र मूल्यहरु
को बालकनी लागि फूल कसरी चयन गर्ने?
नागरिकता - एक राजनीतिक अवधारणा